Ungangibonisa indlela yokuphumelela e-Amazon esebenzisa idatha yokusesha yabadlali bami?
Yebo, lowo ngumbuzo ofanele. Ngisho ukuthi uma isetshenziswe kahle, idatha yosesho lwe-Amazon ye-niche yabo eseduze kakhulu noma isigaba esithintekayo ingaba uhlelo lwakho oluqondile lokuphumelela kwezohwebo ngaphezulu. Futhi mina ngokwami ​​ngikholelwa ukuthi isihluthulelo semiphumela yakho yokuhweba eyenziwa phezulu ingatholakala njalo ekukhethweni okuhlakaniphile kwamagama angukhiye athandwayo aphezulu asetshenziselwa abathengi abaphilayo, ehlangene necebo elihlakaniphile futhi eliguquguqukayo lentengo. Into ewukuthi wonke umsebenzi ungaba nje ucezu lwekhekhe - konke okudingayo ukuthola ithuluzi elifanele lokuqhuba ucwaningo olufanele lokuncintisana futhi ekugcineni ube yimpumelelo e-Amazon nje ukusebenzisa idatha yokusesha yabadlali bakho - como comprar un dominio web en colombia. Ngakho-ke, ucabanga ukuthi into eyinselele kakhulu lapha ukuthola isisombululo esifanelekayo phakathi kwalezi zinhlinzeko ezihlukahlukene kakhulu ezikhona kwi-Inthanethi. Yingakho ngaphasi ngizokukhombisa amathuluzi esofthiwe engcono kakhulu okwenza izinto zibe lula - kokubili ucwaningo lwegama elingukhiye lokuncintisana, indlela engcono kakhulu yokuthola ithuba lokukhahlela, kanye nezisombululo ezenziwe ngokuzenzakalelayo ezidingekayo ukuze ziholele ku-niche yakho noma isigaba somkhiqizo.
Hamba ngomgwaqo oqondile kusukela ekuqaleni
Ake ngiqale ngamathuba okubuka e-Amazon ngedatha yokucinga mayelana nemikhiqizo efunwa kakhulu, imikhakha ethandwa kakhulu futhi amadili ashisa kakhulu atholakala emakethe. Nakhu lapho ithuluzi le-JungleScout liqala ukudlala! Le software isaziwa ngokuthi iyona ndlela engcono kakhulu yokwenza ucwaningo oluqhutshwa kwedatha oludingekayo ukuze kutholakale amathuba athengisa abathengisi e-Amazon, ukuthola indawo engcono kakhulu yokuthembisa ukuthi ingabandakanywa ohlwini lwakho lwemikhiqizo yamanje. Okungaphezulu - ungakwazi kalula ukuguqula lo msebenzi obaluleke ngempela ukulandelela amamethrikhi ayisihluthulelo abaphikisi bakho abaphumelelayo ngendlela elula futhi elula ehamba ngendlela ehamba phambili.
Gcina Izindlela Zokusebenza Ezcono Kakhulu Nezixazululo Eziphezulu Zegama Eliyinhloko
Ububanzi buyinye ithuluzi elihlakaniphile ukuze uthole isithombe esikhulu sokusesha kwe-Amazon, idatha yokusebenza kumazwi angukhiye athandwa njengamanje okwenzelwe ukuhlungwa kwakho, futhi mhlawumbe nokuqonda okubaluleke kakhulu lapha mayelana namagama angukhiye afanele kanye nemisho emifushane yokusesha abaphikisi bakho sebevele babalalele. Okungaphezulu - ngithole indawo enkulu nakakhulu uma kuziwa kuhlelo lomkhankaso we-PPC wokusebenza kahle. Ngempela, leli thuluzi lingisize kakhulu ngokulawulwa kwezinhlekelele, ngenxa yezilinganiso ezithembekileyo nezindinganiso zedatha zamagugu, izinzuzo zenyanga, ukuthengiswa kwemali yokuthengisa, i-post-FBA engenayo engenayo, njll
Zuza Emkhakheni Wokulinganisa Amanani Aphezulu Nokuncintisana
Into egcine ukubonakala engiyifuna ukukukhombisa namhlanje i-Keepa. Kuyindlela elula yokuphatha i-Amazon yamanani okulandelela amanani. I-interface ehlanzekile futhi ecacile iyacaca ngokuzichaza. Kodwa-ke, ake ngibhale izici eziyinhloko ezithembiswa yi-software ye-Keepa yokuthenga ngentengo - okungenani ngenxa yokuphelela. Phakathi kwalaba abanye, lo tracker wamanani angakusiza ngemagrafu yomlando esebenzayo eboniswe ngendlela ehlelekile kahle, ngezixwayiso zesikhathi sangempela ekukhuphukeni kwentengo / ukuphakama nokushintsha kokutholakala, ukubukwa okulula okutholakala ngokuqondile ngokuhambisana nesiphequluli, kanye umsebenzi wokubuka okusheshayo, ukubona amadili wakamuva ku-Amazon futhi uqhathanise amanani cishe ngaso sonke isikhathi.